Khudaarta, khudaarta iyo ubbooyinku | February 2020
Ugu Weyn Ee Khudaarta, khudaarta iyo ubbooyinku
Waxa la raadinayo markaad dooranaysid qaraha
Qaadku waa bakeeriga xagaaga ee dad badan oo badan. Miraha casiirka casiirka ah, taas oo keenta dareemid farxad leh ee caloosha, waa calaamad run ah xagaaga, kulaylka iyo muddada fasaxa. Si kastaba ha ahaatee, mar walba ma awoodo inaan soo iibsano badeeco macaan iyo caafimaad leh, gaar ahaan haddii goballada cimiladu ay tahay jawi aan fiicneyn oo ay ku kobcinayaan beerahooda.
Daryeelka habboon iyo daryeelka qaraha
Noocyada kala duwan ee beeraha casriga ah iyo meelaha magaalooyinka banaankeeda waa mid aad u xiiso leh. Bannaanka si joogto ah u hagaajiya tiknoolajiyada wax soo saarka cusub, beerashada, iyo sidoo kale dhirta sii kordheysa ee ballanqaaday in ay si weyn u kordhiyaan wax soosaarka Isla mar ahaantaana, dhirta caadiga ah ee udub dhexaad u ah miisaska, liiska iyaga oo loo saari karo qaraha, waxay ku riyaaqaan raaxada ugu ballaaran.
Qodobbada waxtarka leh ee qaraha: isticmaalka daawada dhaqameed iyo ka hortagga
Caleemaha huruudka ah, caanaha iyo caanaha macaan - mid ka mid ah midhaha ugu macaan xagaaga. Ku saabsan faa'iido leh qaraha ayaa muddo dheer loo yaqaan. Tani ma aha oo kaliya badeeco dhadhan fiican, laakiin sidoo kale caafimaad leh, midhooto vitamin-taajir ah. Maantana waxaan ka hadli doonaa sidii si habboon loo adeegsan lahaa si loo wanaajiyo caafimaadka iyo ka hortagga cudurrada.
https://lezgka.ru so.lezgka.ru © Khudaarta, khudaarta iyo ubbooyinku 2020